Mawduucyada Jessica Theifels ee Martech Zone |
Maqaallada by Jessica Theifels
Waxaan u arkaa naftayda mid yar oo xagga suuq geynta ah. Ma jecli jadwalka isku dhafan, jadwaliyeyaasha iyo aaladaha qorsheynta - aniga ahaan, waxay howsha ka dhigayaan mid ka dhib badan sidii loo baahnaa. Maaha in la xuso, waxay ka dhigaan kuwa wax ka iibiya waxyaabaha adag. Haddii aad isticmaaleyso aalad qorshaynta kalandarka ka kooban 6 bilood ah - oo shirkaddaadu bixinayso - waxaad dareemaysaa inay waajib kugu tahay inaad ku dhegan tahay faahfaahin kasta oo qorshahaas ah. Si kastaba ha noqotee, suuqgeeyayaasha ugu fiican ayaa ah kuwo dhaqdhaqaaq leh, oo diyaar u ah inay u beddelaan waxyaabaha ku jira jadwalka